SANTOSH PAUDEL'S BLOG : October 2014
स्मृतिमा पोहोरको तिहार
उत्साह कम्ति थिएन, खुशी उत्तिकै । जताततै माला र फुल । घर रङ्ग्याउने र पिलपिले बत्ति टाग्ने काममा छिमेकीबिच होडबाजी नै चलेको थियो । कोहीपनि घर सजाउनमा अल्छे देखिन्नथे । बाटोमा हिड्दैगर्दा प्रत्येक घरमा भलाकुसारी गरेको आवाज छर्लङ्ग सुनिन्थ्यो । प्रदेश गएका छोरा, नाती, भाइभतिजा सबै जम्मा भएका होलान् ? म मनमनै सोच्दै हिँड्दै थिए ।
हिजो मात्र गाउँ झरेको थिए । उता शहरमा कम्ता हर्षोल्लास थिएन । मान्छेहरूको चहलपहल उस्तै थियो । पट्का उत्तिकै पट्किन्थे तर यता भने गाउँ सुनसान थियो । अस्ति भर्खर घरै अगाडी गाडी पल्टेर दर्जनौ मान्छे पाँखामा छरप्रस्ट देखेका गाउँले अझैँ त्रसित थिए । मान्छे त के ? सिङ्गो गाडि नै धुजाधुजा भएथ्यो रे ! धन्न, दुईचारजना हामफालेर बाचेछन् ।
तिहारको चहलपहल र हतारो गाउँभरि सबैमा देखिन्थ्यो । कोही किनमेल गर्न बेसीटार बजार हिडेको भन्थे, कोही दिदीबहिनी लिन, कसैका दाजुभाइ बेसीटारमा भर्खर गाडिबाट ओर्ले रे— फोन आयो । दुई हुल फुच्चेहरू बेतोडले छेवैबाट हुईकिए ।
ल हेर ! सिकेदाई कि छोरी त माला उन्न सक्ने भईसकिछे । कसका लागि उनेकी है ! मोरी, तेरी आमाले भाइ जन्माकी छैन न त । घरमा त एक्लै हो । खै ! बा-आमा । कार्किबारे काकिले सम्झेँथे भन्दे है । गाउँ नै थर्किने गरी ठुल्ठुला स्वरले कराउँदै पसलकी काकी उकालो लागिन् । भारी ठूलै थियो । तिहारका लागि पसलका सामान लेराएको होला । मैले अनुमान लगाए ।
गाउँ सानो । हेर्दा चुटुक्क परेको । पहिलापहिला चाँडपर्व आउँदा शहरको भन्दा कम्ता रमाइलो हुन्थेन । ५२ घरधुरी । दुई टोल— तल्लो टोल, माथिल्लो टोल । एउटै बाजेका सन्तान रे ! पहिलापहिला खुब मिल्थे रे ! पर्दामर्दा गाउँनै जुट्थे रे ! तर आजभोलि भने पहिलेको जस्तो एकता थिएन ।
खै ! किन हो कुन्नी ? कसैले कसैलाई गन्दैनथे । त्यति राम्रोसँग कोही कसैसँग बोल्दैनथे । बाटामा भेटेकालाई बोलाउन खोज्यो चिडिँएर हिड्थे । एकै बाजेका सन्तान भएरपनि ठुस्केर मुन्टो बटार्दै बाटो तताउँथे ।
दुई घर माथि भलायखर्कमा बिजुली बलेछ, हाम्रोतिर आएन । हाम्रो टोलका लागि आएको बिजुलीका खम्बा समयमै लिन नजाँदा अन्तैकाले लगेछ । गाउँका दाजुभाई पुन: पहल गर्न कोहि गएनन् । को जाने ? युवा सबै विदेशमा छन् । बुढाबुढीले के गर्न सक्थे ?
धारामा पानी नआएको दुई महिना भईसकेछ । पानी बनाउँन पनि कोहि गएनछन् । पल्लो टोलका सबै मिलेर बनाएछन् । तिमीहरूलाई पानी दिदैनौँ भन्दै हाम्रोतिर आउने पाइप काटेर ठेडी ठोस्देछन् । अनि कहाँबाट आउथ्यो— पानी ।
वर्ष अघि गाविसको बजेटबाट डोजरले बाटो खनेथ्यो । सबैले बेसीटारबाट जिल्ला सदरमुकाम जाने छोटो बाटो भन्थे । शुरूका दुई चार महिना गाडि मज्जाले गुड्यो । तर, आजभोलि केका गाडि गुड्नु ? कमिला तक हिड्न छाडेछ । बाटाभरी घाँस उम्रेछ । ठाँउ-ठाँउमा डिल भत्केर थुम्का जम्मा भएछ । मर्मतका लागि पुन: जिल्लामा पहल गर्न गएनछन् । त्यही मौका छोपी पारीपट्टीका गाउँलेहरूले जिल्लामा पहल गरेर डाँडापारीबाटै बाटो छिचोलेछन् । अहिले उतैबाट गाडि जिल्ला सदरमुकाम जादो रहेछ ।
'आठ बजिसक्यो— हैन, अझै सुतिराख्छस् । के कुम्भकर्ण भ'को ? उठ कान्छा, चिनि सकिएछ । बिहानबिहानै चिया पिउन पाइएन । जा— पसलमा गएर लेरा ।'
छेवैमा आएर आमा मलाई उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो । उठ्ने मन नहुँदानहुँदै म उठे र पसलतिर लागे । मकै घारी छिचोलेर कान्ला उक्लिदै गर्दा पदमलाई भेटे तर ऊ ठुस्केर गयो, नमज्जा लाग्यो ।
खै ! के भएछ कुन्नि ? सानामा कम्ता जम्थ्यो यसको र मेरो जोडी । आज के भयो ? किन बोलेन ? म निराश मुद्रामा त्यहाँबाट पसलतिर हान्निए ।
"यो सबको भाइभतिज हो । यसको बास उठाउँन पाइन्छ । अस्ति भैंसी बेच्यो । हिजो मकै । आज घरको ढोका बेचेछ । लिनेले बुझ्नु पर्दैन् । यसको आमा छैन् । बाउँ यो जन्मिनु अघि नै मरे । एक्लो छ, मुर्ख छ । बुद्धि एकरत्ति छैन् । यस्तालाई फकाएर सामान लिनुहुन्छ । आज जसले यसको सामान लिएको छ । म त्यसको ढाड नखुस्काइ कहाँ छोड्छु र..."
हो— हल्ला गर्दै दुई ग्रुप ग्वार्रर्रर्रर्र मथिल्लो टोलबाट डाको छाड्दै तलतिर छेवैबाट कुदे । म झस्किए । डरले शरिर काप्यो, फर्केर हेर्न सकिन तर आवाज भने सुन्दै थिए । सत्तो सराप्नेमा पदमको काका नै रहेछन् । पदमले आजभोलि सामान बेच्दै रक्सि पिउँछ भन्ने सुनेको थिए तर पत्याएको थिइन । कुरो सत्य रहेछ, भर्खर थाहा पाए । पोहोर सालसम्म केटो राम्रै थियो । अब त रक्सी नखाइ बस्न नसक्ने नै भएछ । त्यहि भएर पो अघि ठुस्केर हिडेको रहेछ । साथिहरूले कुरा त गरेका थिए— एक थोपा रक्सी घुट्क्याउन पाएन भने जाडोले काम छुटे झैँ काम्ने भएको छ ।
ल, विग्रेछ— पदमे ।
पसलतिर हानिएको म त्यही हुलतिर लागे । गाउँलेहरू सबै भेला भए । चर्का चर्कि बढ्ढै थियो । सामान लिनेमा पल्लापट्टी बडबा रहेछन् । पदमको काका र बडबा बिच भनाभन हुँदै थियो । कुरामा कुरो चल्दै जाँदा एकले अर्कालाई नानाथरी आक्षेप लगाउँदै थिए । कसले के भन्दियो कुन्नि रिसले तात्तिएका काका झ्याप्पै बडबाको घाटि न्याक्न पुगिहाले । छिनमै गाउँलेहरूबीच झडप हुन थाल्यो । वाइसेल र युथफोर्स झैँ दूई तीन गुटमा गाउँलेहरू छुट्टिए । एक गुटले अर्को गुटलाई रगतको नाता बिर्सेर पिट्न थाले । कोहिको बाउसँगको रिसिभि, कोहिको घाँस चोरेको, कोहिको श्रीमतिसँगको झगडा, कसैको पधेँरोमा पानि थाप्न नदिएको, कसैको बाख्रा बारिमा पसेको र हर्जना तिर्नु परेको...
लू ! आइज, तलाई नमारि छाड्दिन भन्दै एकअर्कामाथि मुड्कि बजार्न थाले । तैले धेरै भयो निउ खोजेको । यसरी आँखै आगाडि १९ दिने जनआन्दोलन झैँ गाउँलेदाजुभाइहरूबीच झडप भएको देख्दा म रनभुल्लमा परे । कस्तो रिसिबि ? के को रिसिबि ? किन रिसिबि ? केही बुझ्न सकिन । केहि वर्ष अघि कुखुरो मारेको, बाख्रा खेतमा पसेको, हर्जना तिरेको, भतिजको सम्पत्ति देखेर लुट्न खोजेको, पानी थाप्न नदिएको... यस्तैयस्तै सुनियो र देखियो पनि । न केहि बोल्न सके, न केहि सोच्न, न केहि गर्न । यस्तो हुलमुलमा बस्नु उचित नभएकाले म निरास मुद्रामा एक्लै घरतिर लागे । घण्टौँपछि झगडा साम्य भएछ । कसैको टाउको फुटेछ, कसैको नाख्रि । कोहि रमाउँदै पनि थिए रे...
घर पुगेपछि आमाले झाको झार्नु भयो— किन गएको त्यहाँ ? मर्न मन लाग्यो कि क्या हो । चिनी लिन बिहानै निस्केको मान्छे अ‍हिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । अब, खाना खाएर घाँस लिन जानु । कसैको घरमा जानु परेको छैन । आज देउसी खेल्ने दिन हो क्यारे ! कहिकतै जानु पर्दैन । बिहानको झगडा देखिस् नी ! आमा एकसुरमा मलाई कराउँदै थिए तर वास्ता नगरी म एक गिलास पानि पिएर ओछ्यानमा पल्टिए, एकछिनपछि भुसुक्कै निदाएछु । त्यसपछि कसरी दिन बिते पत्तै भएन । न पहिलेको जस्तो रमाइलो थियो, न देउसीभैलो नै खेलियो । पहिलाको जस्तो दाजुभाईबीचमा जुवा न तास । जति खेल्नु छ, जति रमाउँनुछ आफ्नै घर— घर भन्दा बाहिर डरैडर...
Posted by Santosh Paudel at 11:28 PM No comments: Links to this post
कैले— रूदैरूदै भोकले सुकाएको
भित्रि असिम इच्छाहरूलाई
कल्पना भन्दा कति धेरै तल छ
कहाँ भेटिन्छ— त्यो ठाउँ ?
कहाँ भेटाइन्छ— त्यो महापुरूष ?
Posted by Santosh Paudel at 3:07 AM No comments: Links to this post
बन्धक भईदिन्छ यादहरू
कहालि लाग्दो गहिरो ईनारबाट
उबाउँछ— आँखाले आँशु
तौलिन्छ मान्छे— पटकपटक
Posted by Santosh Paudel at 12:12 AM No comments: Links to this post
कल्पिन्छु कल्पिन्छु— आकाश रधर्तिलाइ भेट गराउने...
जब—कसैको कठोर हृदयभित्र बन्धक भईदिन्छ यादहरू तब—...